Udliwanondlebe nombhali ozimeleyo u-Israel Moreno | Uncwadi lwangoku
Udliwanondlebe nombhali ozimeleyo u-Israel Moreno
UDiana Millan | | Ezahlukeneyo
I-Actualidad Literatura ikonwabele ukwenza udliwanondlebe nombhali ozimeleyo u-Israel Moreno. Lo mhlali waseSevillian uhlala eCeuta, sele ekwazile ukupapasha iincwadi ezintathu, "Ngomso yiHalloween", enye ethi "Namhlanje yiHalloween", kunye nomdlalo wothando ohlekisayo "Emva komculo wam".
Lo profesa uthanda iikomikhi, imidlalo yevidiyo kunye nomdlalo bhanyabhanya, usinika ixesha lakhe elincinci ukuze simazi ngcono.
Iindaba zoncwadi: Phakathi kwezinye izinto, uzichaza njengomthandi wencwadi, uthando lwakho loncwadi luvela phi? Yintoni ebangele ukuba ubhale?
Uisrael Moreno: Ukubhala inoveli bekusoloko kuyenye yeminqweno yam. Kodwa andizange ndiqhubeke nayo. Lo msebenzi, "Ngomso yiHalloween" wazalwa ngenxa yombhalo wefilimu emfutshane eya kumaphepha asibhozo kwaye yayifihliwe kwihard drive kangangeminyaka emine. Ngenye imini ndacinga ukuba ndingayinika ngencwadana kwaye ndiye ndasebenza. Le yindlela azalwe ngayo "Ngomso iHalloween".
KWI: Ke Ngomso ngaba iHalloween yayiyinto yokuqala oyibhalileyo?
KWI: Yintoni okanye ngubani ophefumlela kuye xa ubhala?
I-IM: Eyona mithombo yam iphambili yoloyiko ivela kwiimovie. Ndifunde uncwadi olothusayo oluncinci kunokuba ndingathanda kuba zininzi iintlobo ezinomdla kum ezinje ngeentsomi zembali, iintsomi zolwaphulo-mthetho njl. Ababhali bale mihla umntu akanako ukusilela ukukhankanya uStephen King. Kodwa iinoveli ezimbini ezinkulu ezandikhuthazayo ziyi-Bran Stoker's Dracula kunye noMary Shelley kaFrankenstein. Zibaluleke kakhulu. Kodwa esona siseko sam sikhulu sifumaneka kuthando lwam lwe-cinema ngokubanzi.
KWI: Abanye bethu banezinto ezithile zokuzonwabisa xa kuziwa ekubhaleni. Yeyiphi eyakho? Ngaba unesiko olithandayo, ixesha losuku okanye indawo yokukukhuthaza?
I-IM: Akukho nanye. Ndiyisiphithiphithi ngaloo ndlela kwaye ngamanye amaxesha ndiyamangaliswa yindlela imisebenzi ehlelwe kakuhle ephuma ngayo kumabali nakwabalinganiswa. Ndibhala xa ndinako kwaye andinaxesha lide. Ndineqela leengcali elisebenza nam ukuze kungabikho zintanda ebalini okanye izilungiso.
KWI: Njengoko sele utshilo, ubusoloko ufuna ukubhala incwadi, ayenjani amava xa wawupapasha umsebenzi wakho wokuqala?
I-IM: Ngomso iHalloween ibone ukukhanya xa bendithatha inxaxheba kukhuphiswano lokuqala Indie iququzelelwe ngu-ELMUNDO kunye ne-AMAZON ngo-2014. Nangona ndandingakwazi ukungena kumjikelo wokugqibela, yandinceda ukuzazisa nokwazisa ngomsebenzi wam. Kwakunokwamkelwa okuhle kokubini ukugxekwa kunye noluvo. Lonto indenze ukuba ndiqale ukubhala. Ukuba ngumdlalo wokuzonwabisa, andiqondi ukuba ngendiyilandele le ndlela ukuba ibamkelwe ngendlela ebandayo. Kodwa ke ndibenethamsanqa lokufumana inkxaso eninzi kwaye loo nto indenze ndaluthatha nzulu olu ncwadi.
KWI: Njengomfundi onomdla, zeziphi iincwadi onokuthi zishiye ezona mpawu kuwe?
I-IM: Ukufunda kweNkosi kaTolkien yeeRingi kwakungaphambi nasemva kwam. Ukuba kufuneka ndibulele umntu ngokuthanda kwam ukufunda, ndicinga ukuba nguye. Andazi ngokubhaliweyo, ndingaphantse nditsho ukuba ndinetyala kubo bonke abo balawuli befilimu bandenze ndaphupha ngamabali amnandi, awoyikisayo kunye nomculo ohlekisayo wothando njengakwincwadi yam yokugqibela.
KWI: Tolkien ecaleni, ngoobani ababhali bakho obathandayo?
I-IM: UTony Jiménez, uFernando Gamboa, uJorge Magano, u-Ulises Bértolo. Ngubani ongabaziyo ukuba bajonge izingqinisiso zabo kwi-intanethi. Zonke zinkulu kwaye ezinye iikumkani zishicilela kwidesktop.
KWI: Njengombhali ozimeleyo, nguwuphi umbhali ongathanda ukusebenzisana naye?
I-IM: Ndikunye noTony Jiménez, umbhali ovela eMalaga ongowam ekubhekiswa kuye kuncwadi oloyikisayo lwesizwe. Sele eneencwadi ezintle ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeGAZI LWEGAZI, AMANGCWELE AMAHLANU NGAPHANDLE KWESICWANGCISO okanye ESIZIMELEYO.
KWI: Okwangoku udlale iintlobo ezimbini ezahlukeneyo, ukoyikeka kunye nokuhlekisa ngothando. Ngaba ukhe wakucinga ukusebenzisa isibizo?
I-IM: Ayikhe iphinde iwele engqondweni yam ukwenza umsebenzi kwaye abantu abazi ukuba ndim umbhali. Kula manqanaba azimeleyo ayinangqondo.
KWI: Umsebenzi wakho wokuqala uphume umbulelo kwiskripthi sefilimu emfutshane. Ukuba umntu othile uthathe isigqibo sokuthatha imisebenzi yakhe aye kuyenza kwi-cinema, yeyiphi kubo ongathanda ukuba ibe yiyo? Ungathanda ukuyidlala nabani?
I-IM: Inyani yile yokuba ndingathanda ukubona yonke imisebenzi yam isiwa kumdlalo bhanyabhanya. Ndinendlela yokubhala yesinema kakhulu kwaye nayiphi na imisebenzi yam iya kulunga kule fomathi. Nangona "emva komculo wam" ingangumsebenzi ofanelekileyo kuba ngumculo kwaye kwiscreen esikhulu kuya kujongeka ukuba kufanelekile kangakanani. I-saga ye-Halloween ingayishiya kuthotho, ndicinga ukuba kulapho izakusebenza kakuhle. Inyani yile yokuba ukubona nayiphi na yemisebenzi yam nakweyiphi na kwezi fomati kungandonwabisa. Andikhathali ukuba ngubani owenze le nto, kodwa uhlala ekumgangatho wobuncinci bomgangatho, kungenjalo inokuba sisikhuthazo.
KWI: Yeyiphi into oyithandayo kuwe sele iyinto ebalulekileyo ebomini bakho.Ungamcebisa uthini umntu oqala ukubhala?
I-IM: Ndingakuxelela ukuba ube nomonde kwaye uququzelele isicwangciso kakuhle. Ubukho kwiinethiwekhi zentlalo kubalulekile. Ukwenza itreyila yencwadi kuyanceda kakhulu. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba ubhala incwadi elungileyo. Akukho ncwadana yokupheka yokuzixhasa eya kukunceda ukuba akukho nto inokubakho emva kwayo. Kusebenze kakhulu ukuba ndithumele incwadi kwiibhlog zoncwadi ngenjongo yokuphononongwa (usazi ukuba uziveza kuhlolo olubi, kodwa kuya kufuneka ungene kwaye uyithembe imveliso yakho). Emva koko ilizwi lomlomo liya kubaluleka, nangona licotha, yinjini yokuphumelela.
KWI: Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga… Ingaba unayo iprojekthi ezandleni zakho?
I-IM: Ewe, ndapapasha ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo "Namhlanje yiHalloween", enye incwadi yam yokuqala ethi "Ngomso yiHalloween". Kundithathe iminyaka emibini yokusebenza nzima kwaye ndicinga ukuba iya kuba yindlela yam yokuvalelisa kuhlobo oloyikisayo, nangona ingeyiyo le yolutsha-uhlobo lwabantu abadala apho kulapho ndihamba khona ngcono. Okwangoku ndimisiwe. Uphumle. Ndiyayifuna, kodwa ndinemisebenzi emininzi engqondweni kwaye kungekudala ndiza kubhala kwakhona.
Siyathemba ukuba u-Israyeli uza kusebenza nolo luvo lusokolisa intloko yakhe, kwaye ngethemba lokuba kungekudala siza kukonwabela enye inoveli yakhe. Okwangoku, unokulandela ekhondweni lakhe lapandilladelmonstruo.com.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Udliwanondlebe nombhali ozimeleyo u-Israel Moreno
Iinyani onokungazazi malunga neJK Rowling
Izihloko ezi-5 zeencwadi eziyinyani ezithengisa kakhulu